श्रीमानले कान्छी लिएर हिडेपछी बिरामी श्रीमती रुदै मिडियामा ! बच्चा सहित श्रीमतीको यस्तो बिजोग (भिडियो सहित) – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Video/श्रीमानले कान्छी लिएर हिडेपछी बिरामी श्रीमती रुदै मिडियामा ! बच्चा सहित श्रीमतीको यस्तो बिजोग (भिडियो सहित)
श्रीमानले कान्छी लिएर हिडेपछी बिरामी श्रीमती रुदै मिडियामा ! बच्चा सहित श्रीमतीको यस्तो बिजोग (भिडियो सहित)
आजकल हाम्रो नेपाली समाजमा कयौं महिलाहरुको अवस्था दर्दनाक बन्दै गईरहेको छ । कसैलाई सुत्केरी अवस्थामै श्रीमानले छोडेर भागेको त कसैलाई दोश्रो बिवाह गरेर पुर्व पत्नी र बच्चालाई छोडेर गएको घटना सुनेका र देखिएका छन् । श्रीमानबाट पिडित महिलाको भोगाई अत्यन्त दुख लाग्दा हुने गरेका छन् ।
यस्तै श्रीमानबाट पिडा भोगेकी ३१ बर्सिय शारदा अधिकारीको श्रीमानले कान्छी लिएर हिडेपछि बिरामी अवस्थामा रहेकी शारदा मिडियामा आएर आफ्ना दु:खहरु पोखेकी छिन् । घर सम्बन्धि काम गर्ने उनका श्रीमानले छोडेर गएपछि अहिले खानको लागि निकै अप्ठ्यारो भइरहेको र दैनिक खर्च टार्न समेत समस्या भएको बताएकी छिन् ।
मृगौला रोगि शारदा अर्काको घरमा कपडा धुने देखि भाँडा माझ्ने काम गर्दै आइरेकी छिन् । तर, स्वास्थ्य अवस्था ठिक नभएकाले अहिले केहि काम गर्न नसक्ने भएकी उनले मिडिया सामु आँशु थाम्न सकिनन् । हेरौँ उनले भोगेका दु:ख र पिडा भिडियोमा :